Momba anay - Xuzhou Sanhe Automatic Control Equipment Co., Ltd.
Boaty fanaraha-maso herinaratra
Jiro fitehirizana mangatsiaka
Fampahalalana momba ny ozinina
Firenena / Faritra fananganana orinasa: Faritra fampandrosoana ara-toekarena TongShan
1.000-3000 metatra toradroa
OEM Serivisy atolotra
Tombam-bidy fanao isan-taona
US $ 10 tapitrisa - US $ 50 tapitrisa
Xuzhou Sanhe Automatic Control Equipment Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny volana aprily 2005, manokana amin'ny R&D, famokarana sy fivarotana mpamehy ny mari-pana amin'ny microcomputer, mpanamando ny hamandoana, mpiaro môtô tafiditra, boaty fanaraha-maso vata fampangatsiahana, boaty fanaraha-maso andian-tsarimihetsika, kabine fanaraha-maso PLC mangatsiaka, sns. Andian-tsarimihetsika valo misy karazana vokatra mihoatra ny 200 mankafy ny lazany eo an-toerana sy any ivelany. Ny orinasa amin'izao fotoana izao dia manana mpiasa maherin'ny 80, ka ny 75% amin'ireo mpiasa dia manana diplaoma amin'ny oniversite na mihoatra; ny zavamaniry misy an'ny orinasa dia mandrakotra velaran-tany mihoatra ny 4.000 metatra toradroa, 10 ny tsipika famokarana manara-penitra, ary ny famokarana isan-taona sy ny fahafaha-mitory isan-taona mihoatra ny 350,000 (set). ), manana famokarana sy fitaovana fitiliana manokana, ary manana fenitra fanaraha-maso mahazatra sy fenitra fitsapana. Ny orinasa dia GB / T19001-2016 / ISO9001: 2015 rafitra fanamarinana rafitra fitantanana kalitao. Vokatra maro no nandalo fanamarinana CE, afa-tsy ny varotra. Manana toeram-pivarotana sy serivisy any amin'ny ankamaroan'ny tanàna sy faritra manerana ny firenena izy, ary orinasa indostrialy fanta-daza manome tolotra manohana.
Profiles an'ny orinasa
Xuzhou Sanhe no hany "ivon-toeram-pikarohana teknolojia enti-manadinika PLC ao Shina. Ireo mpikaroka ao amin'ny ivon-teknolojia dia manana fototra teôlôjika matanjaka sy traikefa an-taonany maro natao tamin'ny fifehezana ny vata fampangatsiahana sy ny teknolojia PLC. Mandritra izany fotoana izany dia mitazona teknolojia maharitra miaraka amin'ny oniversite sy oniversite an-trano maro ny ivon-toeram-pikarohana. Ny fiaraha-miasa, ny mpiasa matihanina sy ny teknika be dia be ary ny fitaovana fanandramana sy fanaraha-maso any amin'ny oniversite dia manome fanohanana matanjaka ho an'ny asan'ny Teknolojian'ny Teknolojia Teknolojia. fananganana mpitarika amin'ny indostrian'ny fitaovana fanaraha-maso mandeha ho azy noho ny foto-kevitra momba ny fampandrosoana mifantoka amin'ny serivisy, ny fanahin'ny asa mafy, ary ny haitao matihanina.
Ny orinasa dia eo amin'ny valo voalohany amin'ny indostrian'ny vata fampangatsiahana an-trano, miaraka amin'ny 8% ny tsena. Fandraisana an-tsena: fandrakofana an-trano amin'ny faritany 31, tanàna, faritra mizaka tena ary tanàna, mpanjifa mpivarotra mihoatra ny 300, ary mpanjifa orinasa manohana 100 mahery; tahan'ny fanondranana: mitentina eo amin'ny 35% amin'ny totalin'ny varotra no amidy amin'ny firenena sy ny faritra: Ahitana firenena eropeana, Moyen Orient, Hong Kong, Taiwan ary faritra hafa ny firenena. Famatsiana ara-nofo: Misy mpamatsy mihoatra ny 80, mihoatra ny 60% no marika iraisampirenena, ary ny ambiny dia marika fanta-daza ao an-toerana
Andalana famokarana 7 manara-penitra
Ny vokatr'ilay orinasa dia vokatra fampiharana teknolojia elektronika microcomputer. Ireo chip ampiasaina dia miorina amin'ny fahombiazana, feno amin'ny asany, miaraka amina fiarovana maro, endrika sy fandrosoana fanodinana drafitra mandroso sy antonony ary ny haavo teknika dia mandroso eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary mandroso ao an-toerana. Ny orinasa dia manome lanja lehibe ny fampandrosoana ny vokatra ary mandray tsy tapaka ny fitaovana vaovao, ny teknolojia vaovao ary ny fizotrany vaovao, hany ka ny fanavaozana ny vokatra no lohalaharana hatrany amin'ny indostrian'ny fampangatsiahana anatiny. Nandritra ny taona maro, nitombo ny haben'ny famokarana ary nitombo hatrany ny anjaran'ny tsena. Ny vokatra dia manana rindrambaiko maro isan-karazany eo amin'ny sehatry ny fampangatsiahana sy ny fampangatsiahana vata fampangatsiahana ary ny indostria. Ny orinasa dia afaka mamolavola sy manamboatra vokatra mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa.
Laharana eo amin'ny valo voalohany amin'ny indostrian'ny fampangatsiahana anaty trano
Xuzhou Sanhe dia manolo-tena ho lasa manam-pahaizana amin'ny sehatry ny fitantanana angovo angovo sy ny fifehezana mandeha ho azy, manampy amin'ny fanatsarana ny indostria amin'ny alàlan'ny fanomezana teknolojia sy vahaolana mifandraika. Hatramin'ny niorenany, ny orinasa dia nanolotra singa 6 / enina mihoatra ny 6 tapitrisa amin'ny tsena anatiny sy ivelany. Ireo vokatra ireo dia manompo indostrialy maro: fampangatsiahana, simika, famokarana boiler, fiarovana ny rano (famatsian-drano), fanamboarana milina, ary ady amin'ny afo (fanaraha-maso ny fananganana) Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, ny orinasanay dia nanome vahaolana voarindra ho an'ny tetikasa maro. Ny lehibe kokoa dia misy ny tetikasa fampangatsiahana beton an'ny Station Baidrana Hydropower; ny tetikasa fitehirizana mangatsiaka an'ny Macau Cross-border Industrial Park, ny valan-javaboary fambolena holatra azo hanina any Zhenfeng County, Faritanin'i Guizhou, County Lengyang, Luoyang tetik'asa famokarana bakteria marobe amin'ny fambolena, Hangzhou Ruihui Bio-pharmaceutika famokarana mangatsiaka, na aiza na aiza misy ny vokatra Sanhe, dia nahavita tsara izy ireo ary nahazo dera miely avy amin'ny mpanjifa.
Ny haben'ny tsenan'ny orinasanay dia nahatratra 29,85 tapitrisa yuan
Tamin'ny taona 2020, nanangana Jiangsu Sanhe Control Technology Research Institute ny orinasa. Ny andrim-pikarohana dia miorina amin'ny fampiharana tetikady fampandrosoana entina amin'ny fanavaozana. Mandritra izany fotoana izany dia miara-miasa amin'ny oniversite sy oniversite izy ary mahatsapa ny fiovan'ny tetikasa fikarohana siantifika. Amin'ny ho avy, ny andrim-pikarohana dia ho lasa karazana talenta avo lenta avo lenta amin'ny indostria. Ny andrim-panjakana R&D dia mampiroborobo ny fampidirana sy ny fampandrosoana ny talenta, ny teknolojia, ny tetikasa, ny vokatra ary ny singa vaovao hafa manerana ny faritra sy ny indostria. "Fitiavana sy tso-po, fizarana fanambinana" no filozofianay momba ny asa aman-draharahantsika sy fikatsahantsika fikafika Ny "fikatsahana hatsarana, hihoarana ny tenantsika" no fiadiana majika hahatonga antsika hahita fahombiazana amin'ny varotra sy ny serivisy. Manantena ny ho avy, Sanhe dia hanohy handray "fitaovana vaovao, teknolojia vaovao ary fizotra vaovao" ho iraka ampanaovina azy, "mikatsaka ny hatsarana, mihoatra ny tena manokana" amin'ny fizotran'ny rotsakorana, hahatratra ireo zava-bitan'ny zava-baovao, ary hifanome tanana amin'ireo mpiara-miasa aminy manangana ho avy mamiratra.
No. 18, Minyuan Road, Distrikan'i Tongshan Vaovao, Xuzhou City, Faritanin'i Jiangsu
nomerika nomerika mpanara-maso, fanaraha-maso ny mari-pana incubator, fanaraha-maso ny mari-pana mandeha ho azy, fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny hafanana, thermometer nomerika Aquarium, thermometer nomerika,